Mpanamboatra sy mpamatsy akanjo mena mena avo lenta Lehilahy Wholesale » Haiermei
Akanjo baoty mena mena mainty avo lenta ho an'ny lehilahy
Style Number: HRMNM25
Orinasa ambongadiny sweater dia namokatra akanjo ba volon-doko mena mainty avo lenta ho an'ny lehilahy. Mampiasa vatana 7GG ny tenan'ny vatana mba hanaovana jirika / zana-ketsa, ary ny trims dia manamboatra taolan-tehezana, mety amin'ny lamaody ririnina. OK ny hateviny, mampafana anao tokoa. Vita amin'ny 100 % Fitaovana vita amin'ny landihazo, tsara ho an'ny ankizy izany. Ny lozisialy dia manjaitra amin'ny masinina solosaina. Malemy be ny tanana. Mazava ho azy, afaka manao araka ny angatahinao.
Teo aloha: Akanjo lava pullover malefaka 1/3 Zip-Up Slim Fit
Manaraka: Lehilahy milomano volon'osy poloney O-neck Pullover Jumper
Akanjo mena Pullover mainty
Akanjo ba Pullover avo lenta